Shiinaha Isku-darka cajalad silikoone ah Soo-saar iyo Warshad | Jiashun
Cajalad silikoon:sidoo kale loo yaqaan 'sandwich silica gel', wuxuu ka samaysan yahay silica gel maro maro salka fiber dhalada by vulcanization heerkulka sare, la acid iyo alkali caabin, xirtaan iska caabin, iska caabin heerkulka sare iyo hooseeya iyo iska caabin ah daxalka. Marada silica ayaa sidoo kale loo qaybiyaa isku darka silica silica iyo dareeraha silica dareeraha ah, kuwaas oo sidoo kale loo qaybiyay laba qaybood oo hal dhinac ah oo cajalad ah oo silikoon ah iyo cajalad silikoon oo laba gees leh
Isku qasida silica
Cinjirka silikoonku waa nooc ka mid ah caag silikoon ah oo la isku qurxiyo, kaas oo la sameeyo iyadoo lagu darayo caag silikoon ceeriin ah si loo labanlaabo mashiinka isku darista caagga ama mashiinka cajiinka la xiro, si tartiib tartiib ah loogu daro silica, saliida silikoonka iyo waxyaabaha kale ee lagu daro ka dib markii lagu daro wakiilka foosha xun iyo kuleylka kuleylka. lagu xushay iyadoo loo raacayo shuruudaha nidaamka).
1. Sidee ku saabsan saamiga iyo kharashka?
Muunadku waa bilaash, laakiin waanu kaa qaadi doonnaa kharashka xamuulka, laakiin adiga ayaa kuu soo celin doona qiimaha xamuulka markii aad amarto.
2. Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah in ka badan 20 sano
3.Waa maxay ku saabsan bixinta?
30% dhigaalka ka hor, 70% dheelitirka
4. Intee ayey le'eg tahay waqtiga hoggaanka?
Caadi ahaan 15-20 maalmood gudahood ka dib debaajiga la helay.
5.Waa maxay Shuruudaha Ganacsi ee caadiga ah?
6.Sidee loo xakameynayaa tayadaada?
Waxaan leenahay nidaam damaanad qaad leh oo tayo leh: IQC FAS & Is Hubinta
mid kasta oo soo saara horumar → OQC. Iyo sida hoos ku xusan:
1. Kahor soo saarida: diraya shay-baarka horay loo soo saaray ee hubinta.
2. Inta lagu jiro wax soo saarka: diraya shay-baarka wax soo saarka ballaaran si mar kale loo hubiyo.
3. Kahor rarka: macaamiisha 'ama dhinacyada saddexaad booqashadooda warshadeena
si toos ah u hubi tayada ama kormeer kasta waa la soo dhaweynayaa!
4. Shixnad ka dib: haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo alaabtayada ka soo baxa qaladkeenna,
annaga ayaa masuul ka noqon doonna.
7. Sidee loo damaanad qaadayaa soo raaca waqtiga amarkayga?
Waxaan mudnaan siineynaa amarrada dhoofinta iyo sii wadida cusbooneysiinta horumarka laga bilaabo soo-jeedinta illaa gaarsiinta.
8. Haddii aanaan Shiinaha ku haysan soo-gudbiyaha maraakiibta, miyaad sidan noo samayn lahayd?
Haa, waxaan kuu soo bandhigi karnaa khadka ugu fiican ee maraakiibta si aan u hubino inaad alaabta ku heli karto waqtiga ugu qiimaha fiican
9. Sideen ku heli karnaa liiska qiimaha oo faahfaahsan?
Fadlan na siiso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sheyga sida Cabbirka (dhererka,
ballac, dhumuc), midab, shuruudaha baakadaha gaarka ah iyo tirada wax iibsiga.
Hore: Dharka Dahaarka ee PU
Xiga: Liquid silikoon maro dahaarka leh